Luis Suarez oo rajaynaya inuu xirfaddiisa ciyaareed ku soo gabagabeeyo kooxda Barcelona – Gool FM
Luis Suarez oo rajaynaya inuu xirfaddiisa ciyaareed ku soo gabagabeeyo kooxda Barcelona
(Barcelona) 20 Okt 2016 – Luis Suarez ayaa shaaca ka qaaday inuu doonayo in Barcelona ay noqoto kooxda ugu dambaysa ee uu xirfaddiisa ciyaareed ku soo gabagabeeyo.
Weeraryahanka reer Uruguay ayaa kooxda Catalan kaga soo biiray Liverpool xagaagii 2014-kii, waxaana ay ku soo qaateen adduun dhan 75 milyan oo bound.
Tan iyo markaas 29-sano jirkan weerarka ka dheela ayaa si fiican xagga weerarka ay isula keeneen Lionel Messi iyo Neymar, waxaana dhammaantood ay dhaliyeen 280 gool intii u dhexeysay tan iyo 2014-2015.
Goortii maanta gacanta loo galiyey markiisii labaad Kobta dahabka ah Suarez ayaa u sheegay weriyeyaasha: “In badan ayaan u soo dagaallamay naftayda iyadoo tan iyo intii aan Barcelona imidna aan isku dayayo inaan ku raaxeysto, iska faraxsanoow oo koobab ku guuleyso.
“Waxaan haystaa ciyaartooy cajiib ah oo wax waliba fudeyd kaaga dhigaya, balse ma doonayo wax walba inaan nafteyda ka fogeeyo, waxaad mar walba u baahan tahay inaad dhaliso goolal.
“Waxaan rajaynayaa inaan xirfaddeyda ciyaareed ku dhammaysan doono Barca.”
Suarez, kaasoo 9 gool dhaliyey tartammada oo dhan xilli ciyaareedkan ayaa ka caawiyey kooxdiisa Barcelona inay ku guuleysato labo horyaalka La Ligaha Spain ah, labo Copa del Rey, Spanish Super Cup, UEFA Super Cup, koobka kooxaha Adduunka iyo Champions League.